चौँरीगाईको दूधबाट उत्पादित चिज उत्पादनमा कमी - Kantipath.com
चौँरीगाईको दूधबाट उत्पादित चिज उत्पादनमा कमी
सोलुखुम्बु -यहाँ आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको पहिलो रोजाइ चौँरीगाईको दूधबाट उत्पादित चिज हो । निकै स्वादिलो स्थानीय चिज पर्यटकमात्र होइन यहाँका बासिन्दाले पनि खोजी खोजी किन्छन् ।
जिल्ला बाहिर जानेले कोसेलीका रुपमा चिजलाई लैजाने गरेका छन् । तर पछिल्लो समय चिज उत्पादनमा कमी आएको छ । सरकारले जिल्लामा चिज उत्पादनका लागि डेरी सञ्चालन गरेको ६० वर्ष तथा फार्म सञ्चालन गरेको ४३ वर्ष भयो ।
दुग्ध विकास संस्थान, लैनचौरले विसं २०१३ मा तत्कालीन गोली गाविसमा स्थापना गरेको पिके चिज उत्पादन केन्द्र विगत १० वर्षदेखि घाटामा छ । विसं २०३० मा तत्कालीन खुम्जुङ गाविसमा स्थापना गरिएको स्याङ्बोचे याक विकास फार्मले हालसम्म दुग्धजन्य वस्तुको उत्पादन गर्न सकेको छैन ।
चिज उत्पादन केन्द्रको उत्पादन क्षमता वार्षिक १२ हजार किलोबाट घटेर एक हजार किलोमा सीमित रहेको सो उत्पादन केन्द्रका इन्चार्ज कर्णबहादुर जिरेलले बताए ।
चौँरीगाई पाल्ने कृषक घटेका कारण दूध उत्पादनमा कमी आएको छ । “अहिले दैनिक १५० लिटर मात्र दूध सङ्कलन हुने गरेको छ,” जिरेलले भने ।
दूध उत्पादन घटेका कारण चिज उत्पादनमा कमी आएको हो । यहाँ उत्पादित चिज नेपालकै उत्कृष्ट मानिन्छ । घाटा भएपछि सो केन्द्रले चिजको मूल्य यस वर्षदेखि प्रतिकिलो रु ३०० बढाएर रु एक हजार ४०० बनाएको छ ।
गोलीका चौरीपालक कृषक फुनुरी शेर्पा चिज उत्पादन केन्द्रले दूधको मूल्य अत्यन्तै कम दिएका कारण दूध बिक्री गर्न छाडेको बताउँछन् ।
। सो केन्द्रले कृषकलाई दूध प्रतिलिटर रु १७ मा किन्दै आएको थियो ।
यस्तै याक ‘गोरु’, नाक ‘गाई’ को सङ्ख्या वृद्धि गर्ने तथा दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन गर्ने उद्देश्यले ४३ वर्ष पहिले खुम्जुङमा याक फार्मको विकास गरिए पनि अहिलेसम्म दुग्धजन्य वस्तुको उत्पादन गर्न सकेको छैन ।
दुई सय ९३ रोपनीमा फैलिएको उक्त फार्मको करिब ५० प्रतिशत जग्गा मात्र उपयोगमा छ । बाँकी जग्गा उपयोगविहीन छ । एक सय ६८ रोपनी जग्गा घाँस उत्पादन र चरन क्षेत्रका रुपमा प्रयोग भइरहेको सो फार्मका प्रमुख ललन यादवले बताए ।
याक र नाकको सङ्ख्या घट्दै गइरहेका बेला नेपाल–चीन सीमा क्षेत्र नाङ्पालापास हँुदै तिब्बतबाट दुई वर्षअघि पाँचवटा याक र २५ वटा नाक ल्याएपछि सो सङ्ख्यामा वृद्धि भई ९५ वटा पुगेको छ । ती नाकले जन्माएका बाच्छा राख्ने ठाउँ अभाव भएपछि सरकारले यस वर्षमात्रै ३५ वटा बाच्छा सर्वसाधारणलाई बिक्री गरेको छ । याक विकास फार्मका लागि चालु आवमा सरकारले रु ५० लाख बजेट उपलब्ध गराएको छ ।
यसैगरी निजी क्षेत्रद्वारा करिब २० वर्षदेखि तत्कालीन टाक्सिन्दु गाविसको रिङ्मुमा सञ्चालित नुम्बुर भ्यू चिज उद्योगले वार्षिक १२ सय किलो चिज उत्पादन गर्दैआएको छ । चिज उद्योगका सञ्चालक फु ग्याल्जेन शेर्पा चिज उत्पादनका लागि ४० वटा चौँरीगाई पालेका बताए ।
एक किलो चिज उत्पादनका लागि करिब १० लिटर दूध आवश्यक पर्छ । सो उद्योगले प्रतिकिलो चिज रु एक हजार २०० मा बिक्री गर्दै आएको छ । उक्त चिज उद्योगबाटै खरिद बिक्री हुने गरेको शेर्पाले बताए ।
गत वर्ष जिल्लाबाट ३४ ट्रक (करिब ५००) चौँरीगाई निकासी भएको जिल्ला पशुसेवा कार्यालयका वरिष्ठ पशुसेवा अधिकृत लेखराज दाहालले जानकारी दिनुभयो । चौँरीगाईपालन व्यवस्थापनका लागि रु १० लाख ९१ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
Previous Previous post: कछुवाको पेटमा ९ सय पन्ध्र सिक्का !
Next Next post: कृषकलाई १३ ‘मिनी पावर टिलर’ वितरण
चिनियाँ लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान
सुनको मूल्य निरन्तर ओरालो लाग्यो !
५ अर्ब ७८ करोड २२ लाख ५७ हजार राजस्व सङ्कलन
प्राधिकरणले भारतबाट आयात गरिरहेको विद्युत्को नयाँ मूल्य निर्धारण
“नगरकोट आलु” ब्राण्ड घोषणा